खेल पश्चात् के भन्छन त दिपेन्द्र ऐरि र पारस खड्का! - Hamro Nepal Cricket
खेल पश्चात् के भन्छन त दिपेन्द्र ऐरि र पारस खड्का!
नेपाल – अब एकदिबसिय रास्ट्र
१९८६ बाट सुरु भएको नेपाली क्रीकेटले अहिले सम्मकै सबै भन्दा ठूलो सफलता हासिल गरेको छ।
युवा खेलाडी हरुको बाहुल्यता रहेको नेपाली टोलीले हिजो पि.एन.जि बिरुद्द उत्कृष्ट जित निकाल्दै , एकदिबसिय मान्यता पाउने पक्का गरेको हो।
हङकङलाई पाच विकेटले पराजित गर्दै चौथौ स्थानमा रहेर प्ले अफ खेल्ने मौका पाएको नेपालले हिजो पहिलो प्ले अफमा पि.एन.जि लाई छ विकेटले हराएको हो। टस जितेर फिल्डिङ रोजेको नेपालले पि.एन.जि लाई ११४ रनमा समेटेको हो ।
करण र सोमपालको उत्कृस्ट सुरुवात , वसन्त र सन्दिपको प्रेसर र दिपेन्द्रको क्विक विकेटले पि.एन.जि धराशायी हुन पुगेको हो ।
नेपालका लागि सन्दिप लामिछानेले २९ रन खर्चदै ४ विकेट लिए भने दिपेन्द्र ऐरिले १४ रन खर्चदै ४ विकेट लिन सफल भए।
ब्याटिङ तर्फ पारस खड्काले २० रन , आरिफ सेखले २४ रन र दिपेन्द्र सिङ ऐरिले ५० रन बनाउदा नेपालले चार विकेट गुमाउदै लक्ष्य पूरा गरेको थियो। हङकङले नेदरल्यान्ड बिरुद्दको खेलमा हार बेहोरेपछी नेपालले एकदिबसिय मान्यता पाउने पक्का भएको हो।
पारस खड्का र दिपेन्द्र सिङ ऐरि सङ आइसिसी सम्बादातासङ को कुरा:
यो धेरै ठूलो कुरा हो , हामीले धेरै मेहेनत गर्यौ , एउटा टिमको रुपमा हामीले हामीलाई अगाडि बढाउन कुनै कसर छोडेनौ , सबै खेलाडीहरुले फिल्डमा आ आफ्नो योगदान दिएका छन। यस्ता प्रतिभाशाली , खेलाडीहरुलाइ लिड गर्न पाउँदा म धेरै खुसी छु।
हामी राम्रो गर्न जहिले भोकाएका हुन्छौ , यो प्रतियोगिताको कुरा गर्दा , हो हामीले सुपर सिक्समा स्थान बनान सकेनौ , तर हामीले अझै धेरै क्रीकेट खेल्नु पर्ने छ , आशा गरौ हामी यस्तै प्रकारको प्रतियोगिता खेल्दै आफुलाइ चाहिएको प्रतिफल प्राप्त गर्न सफल हुनेछौ।
आजको खेलमा , हाम्रा बलरहरु उत्कृष्ट रहे ! , सोमपाल र करनले राम्रो सुरुवात दिए , सन्दिप र बसन्तले सधै जसो बिचमा विकेट लिए , र दिपेन्द्र सिङ ऐरिले अन्तिमका ब्याट्सम्यानहरु को विकेट लिदै इन्निङ समाप्त गरे !
हामीले ब्याटिङमा राम्रो सुरुवात गर्न सकेनौ । भिडमा मन जित्नु , खेलमा जित हासिल गर्नु आवस्यक हो। एउटा टोलीको रुपमा हेर्दा , हामीले आफुलाइ स्ट्रङ बनाउदै छौ , र हाम्रो लक्ष्य भनेको जित्ने नै हुनेछ।
दिपेन्द्र सिङ ऐरि :
प्रेसर वाला खेलमा धेरै दिन पछाडी जिताउन सफल भए। खुसी लाग्यो , अर्को खेलमा अझ राम्रो गर्ने छु। मलाइ सबैले सपोर्ट गर्नु भएको छ। चार वटा खेलमा मैले रन पनि राम्रो हानेको थिइन , तर पनि मलाइ टिममा स्थान दिनुभएको छ , धन्यवाद भन्न चाहन्छु !
(आइसिसी सङ बोल्दा दिपेन्द्र ऐरिले नेपालीमा बोले , र पारस खड्काले उनले बोलेका शब्द लाई अङ्ग्रेजीमा परिवर्तन गरेर आइसिसिलाइ भने)
एकदिवसीय क्रिकेटको मान्यता : इन्जमामदेखि क्लार्कसम्मको बधाईको ओइरो